झरीको परवाह नगरी डा. केसीको समर्थनमा माइतीघरमा प्रदर्शन- फोटोफिचर - कान्तिपुर समाचार
आश्विन ६, २०७७ तस्बिर : केशव थापा
काठमाडौँ — जुम्लाबाट म‌ंगलबार काठमाडौं आइपुगेका सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा माइतीघरमा युवाहरुले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन् । केसीको 'फेसमास्क' पहिरिएर सडकमा उत्रिएका युवाहरुले केसीको माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्लेकार्ड बोकेका थिए । कुनै नाराबाजी नगरी दर्के पानीमा उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
जुम्लामा १९ औं अनशन थालेका डा. केसी काठमाडौंमै अनशन जारी राख्ने गरी मंगलबार काठमाडौं आइपुगेका थिए । तर, टिचिङ अस्पताल जान खोजेका केसीलाई प्रहरीले जबर्जस्ती ट्रमा सेन्टर पुर्‍याएको थियो । उनले त्यहाँ उपचार लिन अस्वीकार गरेका छन् । सोलिडारिटी फर डा. गोविन्द केसी समूहले गरेको प्रदर्शनमा युवाहरुले झरीको पर्वाह नगरी सडकमा बसेर प्रदर्शन गरेका थिए ।
प्रकाशित : आश्विन ६, २०७७ १८:२८
काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना, २०७७ सार्वजनिक गरेको छ ।
कोभिडका कारण शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै आकस्मिक कार्ययोजना ल्याएको हो । कोभिडका कारण अवरुद्ध पठनपाठन सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा होम स्कुलिङको अवधारणा, विद्यार्थी—शिक्षक सम्पर्क प्रवर्द्धन जस्ता विधि अपनाएर सिकाइ सहजिकरण गरि सरोकारवालाहरुले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने गरि आकस्मिक कार्ययोजना ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मंगलबार भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको जानकारी गराउँदै बसाइ स्थानान्तरण भएका विद्यार्थीहरुको तथ्यांक संकलन, सबै बालबालिकाका लागि पाठ्यपुस्तक उपलब्धताको सुनिश्चितता र कार्यस्थलमा शिक्षकहरुको उपस्थितिलाई सुरुवाती दिनमा गरिहाल्नुपर्ने कार्यको रुपमा जोड दिइएको बताए ।
शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मूल्यांकन प्रक्रियाको लागि ढाँचा विकास नमुना स्वअध्ययन सिकाइका सामग्रीको विकासलाई कार्ययोजनामा समेटिएको उनले बताए ।
सरकारले यसअघि नै असार १ गतेबाट वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ गर्ने निर्देशिका र असोज १ गतेबाट विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरिसकेको छ । महामारीका विषयलाई एकीकृत रुपमा सम्बोधन गर्न जरुरी रहेकोले अन्तर मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँगको छलफल पछि कार्ययोजना निर्माण गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १ को निर्णयबाट विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना, २०७७ स्वीकृत भएको हो ।
प्रकाशित : आश्विन ६, २०७७ १८:११